Muhaajiriin Soomaali iyo Eritrean ah oo la’ cid qaabisha | puntlandi.com
Tuesday, August 14th, 2018 | Posted by P2
Muhaajiriin Soomaali iyo Eritrean ah oo la’ cid qaabisha
141 ruux oo muhaajirin isugu jira Soomaali iyo Eritrean oo saaran markabka Aquarius oo taagan badda Meditereneanka ayaa la’ dal qaabila.
Dowlada Talyaaniga ayaa ugu baaqday dalka Britain in ay qaabilaan qaxootigan oo tiradoodu gaareyso 141 ruux oo 67 ka mid ah ay yihiin Soomaali iyo Eritrean maadaama markabka ay qaxootigan saaran yihiin uu wato calanka Gibraltar oo ka mid ah dhulweynaha Britain.
Hase yeeshee Ururka Midowga Yurub ayaa sheegay in haddii la eego dhinaca calanka markabka uu ku safrayo ay sax tahay balse waxa uu ku taliyay in la tixgeliyo xaalado kale oo ah sida loo soo badbaadiyay qaxootigan.
Afhayeen u hadashay Guddiga Midowga Yurub u qaabilsan qaxootiga Tove Ernst oo kula hadashay saxafiyiinta magaalada Burssels ayaa sheegtay in ay suurtogal tahay in ay tixgelin mudan tahay calanka markabka uu ku safrayo, Balse haweeneydan ayaa raacisay in ay la xiriireen dalal badan ayna wadaan dadaalo lagu xalinayo arrintan.
Guddiga amniga gobolka Nugaal oo shir xasaasi ah ku yeeshay Garowe kanasoo saareen go’aano culus.
(VIDEO) Nabadoonada Baay iyo Bakool ee ku nool Garowe oo si kulul u cambaareeyay qarixyadii Baydhabo kuna baaqay in argigixisada lala dagaalamo.
(VIDEO): C/raxmaan C/shakuur C/raxmaan C/shakuur “Qaraxii Zoobe laguma tilmaami karo Masiibo , waxaan farxi doonaa maalinta tiirka la soo taago dadkii ka dambeeyay weerarkaasi
Madaxweyne Gaas oo magacaabay taliye xigeenka Xasilinta Garowe.
YAABKA CAAWA : – Prof William Kosar oo sheegay inuu xeerka Shidaalka Somalia uu isagu qoray, usbuucana uu u akhriyey gudiga kheyraadka ee Barlamaanka Somalia
Ciidamada Badda Puntland iyo qalabkooda oo heegan culus la galiyay.
Itoobiya oo 19.19 million USD kumaalgalinaysa Dekada Berbera
Madaxweynaha Puntland oo ku soo wajahan magaalada Garoowe
Breaking News– Maamul Goboleedyada oo ku guuleystay iney Beesha Caalamka kasoo jiitaan Dowlada Federaalka ah